भीम रावलको ४२ करोड भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास, जेल जाने खतरा « Pathibhara Post
भीम रावलको ४२ करोड भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास, जेल जाने खतरा
काठमाडौं, २९ पुस । केपी ओली नेतृतवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता एवम् वन मन्त्री प्रेम घलेले पूर्वमन्त्री डा.भीम रावलले ४० करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
माधव नेपालको निर्देशनका कारण माओवादीबाट एमालेका ५ सय कार्यकर्ता मारिए
काठमाडौं : नेकपा विभाजनसँगै यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल एउटा समूहमा उभिएका छन्।
ओलीले हँसाई-हँसाई प्रचण्डलाई ठहरै पार्ने प्रहार !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई
काठमाडौं, ३ माघ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही ११ माघमा लगनगाँठो कस्दैछन्
काठमाडौं, माघ २- : नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले भारतद्वारा सैन्य कब्जा गरी मिचिएको भूमि फिर्ताको वार्ता
पार्टी विवाद मिलाउन नसक्नेले प्रतिनिधि सभा पीडित बनाउन मिल्छ ?
‘प्रधानमन्त्री ओली कुर्सिमा बसिरहनु मिल्दैन’
‘इजलासमा पेस भएका कागजात सरकारले फिर्ता लग्यो’
भारतले यसरी पन्छायो सीमा विवाद र इपीजी